I-NetBase: Iqonga leNtlalontle yeNtlalontle yoShishino | Martech Zone
NgeCawa, ngoJulayi 22, 2012 NgoLwesithathu, Agasti 6, 2014 Douglas Karr
INetBase, ngaphambili i-Accelovation, liqonga lobukrelekrele kwezentlalo elivumela abaphandi beemarike ukuba balinganise ukuzibandakanya kwabo kwimidiya.
Iqonga leNet Base Monitoring Platform lixhobisa abathengisi ngoqwalaselo lwexesha lokwenyani kunye nezixhobo zokulinganisa ezinikezela ukuqonda okukhawulezileyo nokunxibelelanayo kwinto eqhuba izimvo zabathengi kunye nokuziphatha. INetBase Insight Workbench ibonelela abaphandi bezentengiso ngeseti ye kubahlalutyi, iitshathi nezixhobo zophando.
Nanku umzekelo we-BrandPassion Index yeNetbase, esetyenziselwa ukumisela uhlalutyo lokhuphiswano lophawu (ngomzekelo omkhulu wokuthenga iholide kubathengisi abakhulu):
I-CustomerBase, isixhobo sokugqibela esisebenza kwiPlatform yeNtlalontle yoLuntu, ikhasa umnatha, isalathisa iinyanga ezili-12 zangaphambili zomsebenzi okwi-Intanethi, kwaye idibanisa umbono, izimvo kunye neembono zorhwebo, ukubonelela ngokuqonda okusebenzayo.
Umahluko ophambili kwezinye izixhobo ezifanayo kukusetyenzwa kolwimi lweNdalo. ICustomerBase iyabandakanya -misa amagama njenge kuba, by, kuba or emva iGoogle kunye nezinye iinjini zokukhangela zemveli ziyayihoya Ukubandakanywa okunjalo kuvumela ukucacisa umxholo kunye neemvakalelo zokwenyani, ukuvumela umbono olunge ngakumbi. Umzekelo wenqaku: uGoogle uya kuthi tag kutshisa ngesichazi esibi, kodwa iCustomerBase iya kuqaphela kutshisa ekukhanyeni okuqinisekileyo xa ibinzana lisetyenziswa kwimeko yokuhlamba umlomo.
Eyesibini ephambili i-USP ngumthamo omkhulu wedatha. Iinyanga ezili-12 zomsebenzi zilingana namashumi amabini amawaka ezigidi ngee-byte zesandi ezisuka kumaxwebhu edigital angaphezu kwezigidi ezisixhenxe. Inkampani ibanga ukuba isalathise izivakalisi ezingama-50,000 ngomzuzu kwimithombo efana ne-Facebook ejongene noluntu, iibhloko, iiforamu, i-Twitter kunye neendawo zokuphonononga abathengi.
Abathengisi banokusebenzisa iNetBase njengesixhobo sophando kwintengiso, ukubeka iliso kwimidiya yoluntu, okanye ukunyusa imbuyekezo yabo kutyalo mali loluntu. Ukusuka kwindawo yabo:
Yenza izilungiso ezikhawulezileyo zekhosi yonyuse impumelelo yomkhankaso kunye nemali engenayo. Xa ilizwi lentlalontle likuxelela kwangoko apho amaphulo akho aphumeleleyo kwaye kutheni besokola, unokwenza isenzo ukuphucula ukubuyela kwinkcitho yentengiso.
Yongeza iphulo lokufikelela Ukuchonga abachaphazeli abaphambili kunye nethemba. Uyazi ukuba kukho "ii-VIPs zentlalo" phaya-abantu abamazwi abo ayaviwa njengoko bexelela amawaka wabalandeli malunga negama lakho kunye nabantu abakhuphisana nabo. Bazi kakuhle ukuba ngoobani kwaye ubanike izizathu ezingakumbi zokuzibandakanya. Funda nzulu.
Yenza ukwaziswa kwemveliso entsha ngempumelelo ngo Ukujonga ngokufanelekileyo ukwamkelwa kwabathengi kwimveliso entsha njengoko ingena kwintengiso kwaye inikezela ngokukhawuleza, ngokulungelelanisiweyo iimpendulo kwimiba nakwizikhalazo ezinokuvela. Funda ngakumbi malunga nesisombululo esitsha sokulandela umkhondo wokulandela umkhondo.
Jonga impilo ybrand rhoqo. Yenza izigqibo ezingcono zebrendi kwaye ukhawulezise iimpendulo kwizisongelo zebrendi ngeseti ebanzi ye-KPIs yokulinganisa nokulawula impilo yezentlalo ngexesha lokwenyani. Funda ngakumbi malunga nesisombululo sohlalutyo lophawu. Ukubona indlela impilo yoshicilelo lwentlalo esebenza ngayo kwiingxaki zeshishini lokwenyani, funda uhlalutyo lwe Starbucks kwibhlog yethu.
Qikelela iintshukumo zomntu okhuphisana naye kwaye uphendule ngokukhawuleza kwizisongelo zokhuphiswano ngohlalutyo olukhawulezileyo, lwexesha lokwenyani kwiimpawu ezikhuphisanayo. Funda ngakumbi kwaye ubone i-Brand Passion Index yethu isebenza kwibhlog yeNetBase.
Qonda impendulo enzulu kwezentlalo kumaphulo, ukuze bakwazi ukwenza izigqibo benolwazi. Bona ibhlog yethu ukufunda okungakumbi malunga nendlela iWall Street Journal eyisebenzisa ngayo iNetBase yengxelo yayo yeeveki zeeveki.
Yenza okungakumbi ngohlahlo-lwabiwo mali lwakho kunye nezixhobo. Izisombululo zeNetBase ziqheleke ngokuzenzekelayo kwaye zibeke amagqabantshintshi eendaba ezentlalo kwiindidi eziluncedo kunye neemetriki. Endaweni yokuhlela ngesandla ngamawaka amagqabantshintshi, izixhobo zakho ziyafumaneka ukuze usebenze ekuphuculeni amaphulo.
Qiniseka ukuba ubamba umhlobo wethu, Jason Falls, owenza iSmartts yeWebhu yeWebhu yeNetbase nge-15 ka-Agasti ka-2012: Indlela ye-KISS eya kwimpumelelo yeNtengiso yeDijithali.
tags: ishishini lobukrelekrele kwezentlaloiqonga lobuntlola beqongai-netbaseesweni-time realulawulo lwegamauhlalutyo kwezentlaloubukrelekrele kwezentlaloimilinganiselo yentlalonxaxheba kwezentlalo
Umkhwa weNtengiso ye-imeyile: Sebenzisa oonobumba abakhethekileyo kwimigca yezihloko
Jul 23, 2012 ngo-1: 22 AM
Xa Thenga abalandeli bakaFacebook ubuninzi beendwendwe kwiphepha lakho ngokufanelekileyo njengoko indawo yakho iya kwanda, ikuvumela ukuba usebenzise kakhulu inethiwekhi yoluntu yokwandisa ingeniso. Liyanda inani labantu ngoku abasebenzisa iiwebhsayithi zokuncokola ukuze banxibelelane nabahlobo kunye neentsapho zabo. Ngenani elimangalisayo labathengi abavula inethiwekhi yonke imihla unethuba elingenamkhawulo lokubonisa inkampani yakho, iinkonzo kunye nempahla kwabo baza kuba ngabathengi kwihlabathi liphela.Thenga abalandeli be-facebook kubalandeli bakho zentlalo